८ बर्षपछि मोडलिङमा नरेशको कमब्याक, रेविकासँग कति जम्यो केमेष्ट्रि ? |भिडियो « Filmy Nepal
८ बर्षपछि मोडलिङमा नरेशको कमब्याक, रेविकासँग कति जम्यो केमेष्ट्रि ? |भिडियो
Published On : 10 March, 2020 5:13 pm
चर्चित सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई स्टारर गीति भिडियो ‘बाटोको काँडा..’ सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक प्रेस भेटघाटका बीच भिडियो वर्ल्ड प्रिमियर गरियो । भिडियोमा नरेशसँगै अभिनेत्री मोडल रेविका गुरुङ फिचर्ड छन् ।
डेढ दर्जनबढि भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेका नरेशले यो गीतमार्फत ८ बर्षपछि मोडलिङमा पुनरागमन गरेका हुन् । सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञाशामा उनले अर्को बर्ष फिल्ममा पनि देखिँदै गरेको रहस्य खुलाए । नरेश पछिल्लो दुई दशकदेखि सञ्चारकर्मसँगै गीत रचनामा सकृय छन् भने पछिल्लो बर्ष फिल्म ‘बोवी’को स्कृप्ट र स्कृनप्ले लेखनमा निर्देशक मिलन चाम्ससँग साझेदारी गरेका थिए ।
सपनकुमार राईको स्वर रहेको गीतमा शब्द र संगीत ताराप्रकाश लिम्बुको छ । साहश शाक्यले एरेञ्जको काम गरेका छन् । चाम्स इन्टरटेन्मेन्टको तर्फबाट रिलिज गरिएको भिडियोमा सम्पादन प्रज्वलित पराजुलीको छ । रामकुमार केसीको छायांकन छ ।
चलचित्र पत्रकार संघमा सिटौलाको नेतृत्व
चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको ८औं महाधिवेशनबाट दिनेश सिटौलाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।
कोरोना प्रभावः नेफ्टा अवार्ड अनिश्चित, आयोजकले माग्यो माफी
विश्वब्यापी रुप लिँदै गएको कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष असर नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई पनि परेको छ ।
अराजको र्‍यापमा अभिनाशले ल्याए ‘माथिल्लो लेक’ |भिडियो
गायक अभिनास घिसिङले आफ्ना दर्शक तथा श्रोतामाझ नयाँ म्युजिक भिडियो लिएर आएका छन् । अभिनासले
आरसीको ‘लालपुर्जा’मा सुनिल र रक्षाको ठूम्का
आर.सी.सापकोटा र मेलिना राईको स्वर समावेश नयाँ गीति भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘लालपुर्जा’बोलको गीतमा
जापान त्यागेर मोडलिङ रोजेकी बोल्ड कविता (फोटो फिचर)
'सकस' आईटम गीत रिलिज, बाहिरियो प्रियाको हट अबतार
मुकेशसँग माया साट्दै फेवातालमा करिश्मा (भिडियो)
हमालसँगको मिटिङले तनाबमा निखिल !